Zuza kwi-Journal Square 2060 Redevelopment Plan noma ngabe useCambeni - i-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy
Ikhaya / Blog / Ukuqothuka / Zuza kwi-Journal Square 2060 Redevelopment Plan noma ngabe useCambululwe
January 23, 2017 Ukuqothuka, Ukuqothuka kweNew Jersey, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUVeer Patel
Kusho ukuthini ukuthi i-Journal Square 2060 kothile onokwembulwa kwebhange noma one-Regency Defence Lien?
Wonke umuntu ukhumbula ukuphahlazeka kwemakethe yezindlu kwaqala cishe nge-2006 nase2007 ngamanani entengo asekhaya aphuma ku2012. I-Journal Square 2060 iqala ukwenza amanani entengo kubantu abasemkhakheni wokuphinda kwakhiwe we-Journal Square 2060. Lokhu ngempumelelo kubuyisela emuva ukuphahlazeka kwabantu endaweni yokudala kabusha. Chofoza lapha ukuthola uhlelo oluphelele.
"Lolu hlelo lokuphinda lwakhiwe lubhekise kwi-Journal Square, esiteshini sesitimela se-PATH nedepho yebhasi, kanye nezindawo ezingomakhelwane ezazihamba ibanga, ezinendawo engaba ngamahektare we-211, amabhlokhi amadolobha we-57, cishe namaphasela we-1600." ekugcineni bazobona indawo iphinde yakhiwa kabusha njengoba ibihlelelwe ekuqaleni kusukela nge-1974.
Abantu abahlala eJersey City sebevele sebeqala ukubona amanani abo asekhaya enyuka ngokubonga engxenyeni yecebo lokuphinda lakhiwe. Abantu abasebenza kunoma imiphi imigwaqo ebhalwe ngezansi banethuba lokuhlomula kulolu hlelo:
I-State Highway 139
IVan Reipen Avenue
Isitaladi iVan Reypen
Kwenzekani uma ibhange lami lingivelela?
Uma ubhekene nokusobala, unezinketho eziningi. Ngokuya ngenani lekhaya lakho nendawo okuyo, ungahle ukwazi ukuphinda uqonde, uthole ukuguqulwa kwemali mboleko, noma uthengise ikhaya lakho ngenzuzo enkulu. Ukuqothuka kungaba inketho evumelekile kuwe, kepha phatha lokhu njengenketho yakho yokugcina uze uthole ithuba lokukhuluma nommeli. Kepha noma ngabe yisiphi isimo osithola ekuso, xoxa nommeli wesimo sezulu ngaphambi kwesimo sakho esithile ukuze uqhamuke necebo. Uma uhlala endaweni yokwakhiwa kabusha, khuluma ngqo nommeli weDolobha LaseJersey okwaziyo ukuthi kwenzekani ngale ndawo. Uma ufuna ukukhuluma nanoma yimuphi ummeli we-NJ Foreclosure, kungenzeka ukuthi awutholi imininingwane ethile ngesimo sakho. Cishe uyi-100% eqinisekisiwe ukulahlekelwa yikhaya lakho uma ungenzi lutho. Kungani ungafuna ukuba ibhange lakho lizuze kwinhlanhla yakho embi? Xoxa noMmeli Wezokuvikela Umuzi Wezindawo Ezivikelekile namuhla.
Kwenzekani uma nginecala lentela elivezwa kimi?
Konke okungenhla kusebenza kuwe, nge-panat engeziwe UNGADINGA UKUFANELE. Ukuvezwa kwamanani entela iNew Jersey kuphathwa ngendlela ehlukile kunokuvezwa yibhange. Abantu abaningi bayazi lapho bengakhokhi izintela zabo iminyaka eminingana. (Kunezimo lapho umuntu ezuza ifa lendlu, futhi angaboni ukuthi intela ayikhokhwanga.) Ngokushesha abantu badinga ukuza namashumi ezinkulungwane zamaRandi ukusindisa umndeni wabo ekhaya ukugwema ukubekelwa umthelo wentela noma ukulahlekelwa ngumuzi wabo ngokuyisisekelo amapeni ngedola kumuntu othenge isitifiketi se-lien tax ekhaya futhi akhokhe intela yeminyaka emibili edlule.
Ngakho-ke, uma ngabe ubhekelwa kusengaphambili ngenxa yokuvezwa kwesitifiketi seNj tax Lien noma i-NJ tax Sale, udinga ukuqhamuka necebo ngokushesha okungaphezu kwesenzo sokuvunyelwa kwempahla engabonakali yasebhange. Nakulokhu futhi, udinga ukukhuluma nommeli owazi kahle wezokuvikela iJersey City Foreclosure Defender namuhla oqonda ukuthi ungasizakala ngubani ohlelweni lokuphinda lwenziwe kabusha lweJersey Square 2060 yize ubekwa phambili.
Uma lokhu kwenzeka Isahluko 13 ukuqothuka kungakusiza ukumisa Ukudalulwa Kwentela Ye-New Jersey. Ngeke kudingeke ukuthi uqede ukuqothuka ukuze ugcine impahla yakho. Wena kufanele ukhulume nommeli oqonda ukuthi ukuqothuka kusebenza kanjani ekubonakalweni kwentela. Uma uzibuza ukuthi ukuqothuka kungasithinta kanjani isitifiketi sokuthengiswa kwemali yentela, konke okufanele ukwenze ukucela ukuboniswa mahhala.
Sinciphise ijubane futhi sayeka ukubikezela kwabantu ukuthi yize bekungekho ndlela yokuphuma. Silapha ukukusiza futhi sisebenzele intshisakalo yakho enhle, hhayi eyasebhange noma noma ngubani othenge i-lien yakho yentela futhi empeleni ufuna ukuhamba nomndeni wakho uye ekhaya ngokungasizi lutho. Siyazi ukuthi angakwenza kanjani ukuthi uhlelo lwenkantolo lusebenzele lungalwi nawe.
Sishayele namuhla ukuhlela ukubonisana kwamahhala e844-533-3367 noma usithumele i-imeyili lapho [Email protected] noma ugcwalise lefomu elingezansi:
Inkantolo ikhiphe isinqumo ngecala lesibhamu